यर्मिया 51 ERV-NE - परमप्रभु - Bible Gateway
51 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“म एक शक्तिशाली हावा बाबेल
र ‘लेब कामीका’[a] बासिन्दाहरू माथि बहाउनेछु।
2 म बाबेलमा विदेशीहरू पठाउनेछु
अनि तिनीहरूले नबेललाई हावामा तितर-बितर पार्नेछ
र उसको जमीन नष्ट पार्नेछ।
तिनीहरू सर्वनाशको दिन प्रत्येक दिशाबाट आउनेछन्।
3 बाबेलका सिपाहीहरूले धनु काँडहरू चलाउने छैनन्
ती सिपाहीहरूले कवच सम्म लगाउने छैन।
बाबेलका सैनिकहरूमाथि दया नराख।
उसको सेनाहरूलाई पूर्ण रूपमा ध्वंस पार।
4 बाबेलका सिपाहीहरू कल्दीका भूमिमा मारिनेछन्
तिनीहरू बाबेलका गल्लीहरूमा नराम्रो घतले घाइते हुनेछन्।”
5 इस्राएलका एकमात्र पवित्रको अघि
दोषले भरिएको भए पनि
सेनाहरूका परमप्रभुले इस्राएल
र यहूदालाई एक्लै छोड्नु हुन्न।
तर तिनीहरूले उहाँलाई छोडिदिएका छन्।
6 बाबेलदेखि भाग प्राण बचाऊ।
बाबेलको पापको कारणले ध्वंस नहोऊ।
यो समय परमप्रभुले बद्ला लिने समय हो।
उसले गरेको कर्म अनुसार उहाँले बद्ला लिनुहुनेछ।
7 बाबेल परमेश्वरको हातमा एक सुनको कचौरा थियो।
बाबेलले सारा पृथ्वीलाई मतायो।
सारा जाति-जातिहरूले बाबेलको मद्धपान गरे।
यसकारण तिनीहरू पागल भए।
8 तर बाबेल एक्कासि पतन हुनेछ अनि टुक्रिनेछ।
उसको लागि विलाप गर,
अनि उसको घाउमा मलहम लगाऊ।
हुन सक्छ ऊ निको हुन्छे।
9 हामीले बाबेललाई निको पार्ने कोशिश गर्यौ,
तर त्यो निको हुन सकेन,
यसकारण हामीले त्यसलाई छोडौं
अनि हामी आफ्नै देशमा जाऊँ।
किनभने उहाँको न्याय स्वर्ग पुग्नेछ,
अनि बादलसम्म पुग्नेछ।
10 परमप्रभुले हामीलाई विजय हासिल गराउनु भयो।
आऊ, हामी सियोन जाऊँ,
र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको कार्यहरूका विषयमा मानिसहरूलाई भनौं।
11 काँडहरू तीखो पार ढालहरू लगाऊ।
परमप्रभुले मादीहरूका राजाहरूलाई उस्काउनु भएको छ।
किनभने उहाँले बाबेललाई ध्वंस गर्न चाहनु हुन्छ।
बाबेलका सेनाले यरूशलेममा परमप्रभुको मन्दिर भत्काएका थिए।
यसकारण परमप्रभुले तिनीहरूलाई दण्ड दिनुभयो जुन तिनीहरूले पाउनु नै पर्ने थियो।
12 बाबेलको पर्खालहरूका विरूद्ध
झण्डा माथि उठाऊ।
अझ प्रहरीहरू ल्याऊ।
तिनीहरूका ठीक-ठीक ठाउँमा चौकीदार राख।
धरापहरू थाप किनभने परमप्रभुले त्यही गर्नुहुन्छ
जुन उहाँले योजना बनाउनु भएकोछ।
13 बाबेल, तिमी धेरै पानी भएको छेवमा छौ तिमी सम्पत्तिले सम्पन्न छौ।
तर तिम्रो अन्त आएको छ।
यो तिम्रो ध्वंस हुने बेला हो।
14 सेनाहरूका परमप्रभुले यो प्रतिज्ञा आफ्नो नाउँ लिएर गर्नुभयो:
“बाबेल म तिमीलाई धेरै शत्रुहरूले परिपूर्ण पारिदिनेछु।
तिनीहरू सलहहरू जतिकै हुनेछन्।
तिनीहरूले तिम्रो विरूद्ध युद्ध जित्नेछन्,
र तिनीहरू तिमीमाथि उभिएर विजय गान गाउने छन्।”
15 परमप्रभुले आफ्नो महान शक्ति प्रयोग गर्नुभयो अनि पृथ्वी सृष्टि गर्नु भयो।
उहाँले आफ्नो ज्ञानले पृथ्वीलाई स्थापित गर्नु भयो
र उहाँले आफ्नो समझ र बुद्धिले आकाशलाई फैलाउनु भयो।
16 जब उहाँ गर्जनुहुन्छ आकाश पनि गर्जन्छ,
उहाँले पृथ्वीको अन्तबाट कुइरो निस्केर माथि आउने पार्नुहुन्छ।
उहाँले बर्षासँग बिजुली चम्काउनुहुन्छ।
उहाँले आफ्नो भण्डारबाट बतास निकाल्नुहुन्छ।
17 तर हरेक मानिसहरू मूर्ख र बुद्धिहीन छन्।
परमेश्वरले के गर्नुभयो सो जान्दैनन्,
हरेक मानिस जसले मूर्ति बनाउँछ,
उसलाई लज्जित पारिन्छ।
किनभने उसको मूर्तिहरू मूल्यहीन हुन्।
तिनीहरूमा जीवन छैन।
18 तिनीहरू मूल्याहीन छन्,
छलको काम मात्र गर्छन्।
जब तिनीहरूलाई सजाय दिइन्छ
19 याकूबका परमेश्वर यी मूर्तिहरू जस्ता मूल्यहीन हुनुहुन्न।
मानिसहरूले परमेश्वर बनाएनन्।
परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरू बनाउनुभयो।
उहाँले आफ्नो उत्तराधिकारी जाति सहित प्रत्येक चीज बनाउनु भयो।
20 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “बाबेल! तिमी मेरो डण्डा हौं,
मेरो युद्धको हतियार।
मैले त्यस जाति जातिहरूलाई टुक्राउनु र ध्वंश पार्नुलाई चलाएँ।
21 मैले तिमीलाई घोडा र सवारीमा प्रहार गर्न चलाएँ।
मैले तिमीलाई रथ र सारथीहरू धूलो पार्न प्रहार गरें।
22 मैले तिमीलाई पुरूष र स्त्री माथि प्रहार गर्न चलाएँ।
मैले तिमीलाई, जवान र वृद्ध मानिसहरूमाथि प्रहार गर्न चलाएँ।
मैले तिमीलाई युवा-युवती माथि प्रहार गर्न चलाएँ।
23 मैले तिमीलाई गोठालो र भेंडा़वथान माथि प्रहार गर्न चलाएँ।
मैले तिमीलाई किसानहरू र गाईहरूमाथि प्रहार गर्न चलाएँ।
मैले तिमीलाई राज्यपालहरू र मुख्य हाकिमहरूमाथि प्रहार गर्न चलाएँ।
24 तर म बाबेल र सबै कल्दीहरूलाई
तिनीहरूले सियोन विरूद्ध गरेका जम्मै अनिष्ट कार्यहरू फर्काइदिनेछु।”
परमप्रभु ती कुराहरू भन्नुहुन्छ।
25 परमप्रभु भन्नुहुन्छ,
“बाबेल! हे पर्वत नष्ट छ जसले सारा भूमि नै नष्ट पार्छ म तिम्रो विरोधमा छु।
म तिम्रो विरोधमा मेरो हात उठाउँछु।
म तिमीलाई भिरालो चट्टानबाट तल झारी दिनेछु,
म तिमीलाई डढेको पर्वत बनाईदिनेछु।
26 आफ्नो मन्दिरको लागि कुने ढुङ्गा,
अथवा घडेरी बनाउनको लागि मानिसहरूले तिमीहरूबाट ढुङ्गाहरू लिनेछैनन्।
किनभने तिमी सधैँका निम्ति काममा नआउने भूमि हुनेछौ।”
परमप्रभुले घोषणा गर्नु भयो।
27 “भूमिमा युद्धको झण्डा उठाऊ।
सबै जाति-जातिहरूमा युद्धको तुरही फुक।
जातिहरूलाई बाबेलको विरूद्ध लडाइँ गर्नलाई तैयार पार।
अरारत, मिन्नी र अशकनज राज्यहरूलाई
बाबेलको विरूद्ध लडाइँ गर्न डाक।
उसको विरोधमा सेना संचालन गर्न एकजना कप्तान नियुक्त गर।
संख्यामा सलहसरह घोडाहरू त्यहाँ पठाऊ।
28 उसको विरूद्ध लडाइँ गर्न जाति-जातिहरू तयार पार।
मादीका राजाहरूलाई, राज्यपालहरू, सारा मुख्य हाकिमहरू
र तिनीहरू जसले बाबेल विरूद्ध शासन गरे
ती जम्मै देशहरूलाई तैयार पार।
29 जब बाबेललाई जन शून्य,
उजाड भूमि बनाउन परमप्रभुको काम
अनि बेदनामा परे झैं माडिनेछ।
30 बाबेलका सिपाहीहरूले लडाइँ गर्न बन्द गरे।
तिनीहरू आफ्नै दृढ किल्लाहरूमा पसे।
तिनीहरू थकित भए।
तिनीहरू स्त्री जस्तै भए।
बाबेलका घरहरू जलिरहेका छन्।
अनि प्रवेशद्वारहरू भत्काइएका छन्।
31 एक सन्देशवाहकको पछि,
अर्को सन्देशवाहक जान्छ,
अनि सम्पूर्ण शहर कब्जामा पर्यो भन्ने खबर
बाबेलका राजाकहाँ पुर्याइन्छ।
32 चाँचरहरू घेरामा परे;
सिमसारहरू आगो लगाइए;
सिपाहीहरू भयग्रस्त भए।”
33 सेनाहरूका परमप्रभु, इस्राएलहरूका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ,
“बाबेल धान कुट्ने ढिकी जस्तै भएकी छ।
बालीको समय मानिसहरूले धान कुटेर असल र भुस छुट्याउँछन्।
अनि बाबेलमा धान कुट्ने समय चाँडै आइरहेछ।”
34 सियोनका मानिसहरूले भन्नेछन्,
“बाबेलका राजा नबूकदनेस्सरले हामीलाई खायो।
हामीलाई चोट पुर्यायो।
हाम्रा मानिसहरूलाई टाढा पुर्यायो।
उसले हामीलाई खाली भाँडाजस्तै बनायो।
हाम्रा असल-असल थोकहरू सबै लग्यो।
राक्षसलेझैं उसले हामीलाई निल्यो।
हाम्रो राम्रो भोजनले उसले आफ्नो पेट भर्यो।
तब उसले हामीलाई बाहिर थुक्यो।
35 बाबेलले हामीमाथि डरलाग्दो र निन्दनीय कामहरू गर्यो।
अब हामी बाबेलमाथि त्यही अनिष्टहरू भएको हेर्न चाहन्छौं।”
सियोनका मानिसहरू यो कुरा भन्छन्,
“हाम्रो रगत बाबेलका मानिसहरूमाथि परोस्।
तिनीहरूले बिगतमा जे गरेका थिए तिनीहरूमाथि त्यस्तै दण्ड होस्।”
यरूशलेमका वासिन्दाहरूले यो कुरा भन्छन्।
36 यसकारण परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“यहूदा! म तिमीहरूको मामला लिनेछु
र प्रतिशोध गर्नेछु।
म बाबेलको समुद्र सुकाइदिनेछु,
अनि झरनाहरू सुकाइदिनेछु।
37 बाबेल मन्दिरहरूका भग्नावशेषहरूको थुप्रो मात्र भएको छ।
अनि त्यो जङ्गली कुकुरहरू बस्ने ठाउँ हुनेछ।
मानिसहरू ढुङ्गाहरूको राश हेर्न डराउनेछन्।
बाबेलको विषयमा सोचेर मानिसहरू टाउको हल्लाउने छन्।
यो कोही नबस्ने सुनसान ठाऊँ बनिनेछ।
38 “बाबेलका मानिसहरू गर्जने जवान सिंह जस्तै छन्।
तिनीहरू डम्मरूहरूझैं गर्जिन्छन्।
39 जब तिनीहरू उत्तेजित हुन्छन्
म तिनीहरूलाई एक प्रीति भोज दिनेछु।
म तिनीहरूलाई मताउनेछु।
तिनीहरू हाँस्ने छन् खुशी मनाउनेछन्।
तिनीहरू कहिल्यै नउठ्नलाई निदाउँनेछन्।”
तिनीहरू कहिल्यै उठ्ने छैनन्।
40 “बाबेल भेंडा़-भेंडी़ र बाख्राहरू झैं काटिनलाई पर्खिरहको हुनेछ।
तिनीहरूलाई म कसाइखानमा डोर्याउँनेछु।
41 “शीशक परास्त हुनेछ।
सारा पृथ्वीको गौरव र प्रशंसाको पात्र बाबेल कैद गरिनेछ।
अन्य जातिहरूका मानिसहरूले बाबेलमा हेर्नेछन्
अनि त्यस देशको सर्वनाश देखेर तिनीहरू भयग्रस्त हुनेछन्।
42 समुद्र उर्लेर बाबेलमाथि उठ्नेछ र ढाकिने छ।
यसको गर्जने छालहरूले उसलाई ढाकी दिन्छ।
43 बाबेलका शहरहरू नष्ट पारिनेछन्।
बासिन्दाहरू बिना ती शहरहरू
सुख्खा मरुभूमि र उदास हुनेछन,
बाबेल देशबाट मानिसहरू यात्रा गर्नेछैनन्।
44 म बाबेलको बाललाई दण्ड दिनेछु।
उसले जे-जे निलेको छ त्यसलाई उल्टी गराउँछु।
बाबेलमा जाति-जातिहरूका मानिसहरू अब उसो आउने छैनन्।
बाबेलको पर्खाल ढल्नेछ।
45 हे मेरो मानिसहरू हो।
बाबेलका शहरबाट बाहिर निस्क र आफ्नो प्राण बचाउँन भाग।
परमप्रभुको भयानक रीसदेखि भाग।
46 “हे मेरा मानिसहरू हो, नडराऊ।
उड़न्त कुराहरू फैलिनेछ तर नडराऊ।
यो बर्षमा एउटा उड़न्त कुरा आउँनेछ;
अनि अर्को बर्षमा अर्को आउँनेछ,
यस भूमिमा हिंसाको उड़न्त खबरहरू
र शासकहरूको विरूद्ध शासकहरू लड्ने उडन्त कुरा हुनेछ।
47 निसन्देह समय आउने छ
जब म बाबेलका झूटा देवताहरूलाई सजाय दिनेछु
अनि बाबेलका सारा देश लाजले पानी हुनेछ।
धैरे लाशहरू लडिरहेका हुनेछन्।
48 तब स्वर्ग र पृथ्वी
अनि त्यहाँ भएका सबै बाबेलका बारेमा आनन्दले काराउने छन्
किनभने ध्वंसकहरू बाबेलसित लड्न
उत्तर दिशाबाट आउनेछन्।”
49 “बाबेलले इस्राएलबाट आएका मानिसहरू मारे।
बाबेलले पृथ्वीमा भएका प्रत्येक ठाउँबाट आएका मानिसहरू मारे।
यसकारण बाबेलको पतन हुनै पर्छ।
50 तिमीहरूलाई तरवारहरूबाट बचाइएकोछ।
एकदम चाँडो बाबेल छोड, नपर्ख।
तिमीहरू घेरै टाढा ठाउँमा छौ
परमप्रभु र यरूशलेमलाई सम्झ।
51 “हामी यहूदाका मानिसहरू लज्जित गराइएका छौं।
हामी अपमानित भएकाछौं
र तिरस्कारले हाम्रा अनुहारहरू ढाकिन्छ,
किनभने विदेशीहरू परमप्रभुको मन्दिरको पवित्र ठाउँहरूमा पसे।”
52 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “समय आइरहेछ,
जब म बाबेलका मूर्तिहरूलाई न्याय-दण्ड दिनेछु।
त्यो देशका चारैतिर चोटहरूमा रूनेछन्।
53 स्वर्गसम्म बाबेल बढ्न सक्छ।
उसले उसका किल्लाहरू बलियो बनाइदिनेछ।
तर उसको विरूद्ध ध्वंसक पठाउनेछु।”
54 “हामी बाबेलमा मानिसहरूले विलाप गरिरहेका सुन्न सक्छौं।
बाबेलको देशमा मानिसहरूले नष्ट पारिरहेको आवाज हामी सुन्छौ।
55 परमप्रभुले बाबेललाई नष्ट गरिदिनु हुन्छ,
उहाँले त्यो शहरको कोलाहललाई बन्द गरिदिनु हुनेछ,
शत्रुहरू समुद्रका छालहरू जस्तै गर्जेर आउनेछन्।
पृथ्वीभरि मानिसहरूले त्यो गर्जन सुन्नेछन्।
56 सेना आउने छ अनि बाबेल नष्ट पार्नेछ।
बाबेलका सिपाहीहरू तितर-बितर हुनेछन्
तिनीहरूका धनुहरू भाँचिने छन्।
किनभने परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ
जसले परिशोधन माँग गर्नुहुन्छ।
उहाँले निश्चय तिनीहरूलाई चुक्त पारिदिनु हुनेछ।
57 म बाबेलका ज्ञानी मानिसहरू
र मुख्य हाकिमहरूलाई मताईदिनेछु
म राज्यपालहरू, हाकिमहरू
र सिपाहीहरूलाई पनि दाखरसमा डुबाइ दिनेछु।
तब तिनीहरू सबै सदा-सर्वदाका निम्ति सुत्नेछन्
तिनीहरू कहिल्यै ब्यूँझिने छैनन्।”
महाराजाले यी कुराहरू भन्नुभयो।
58 सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“बाबेलको बाक्लो, बलियो पर्खाल झारिनेछ।
उसको अग्लो प्रवेशद्वारहरू जलाइनेछ।
बाबेलका मानिसहरू व्यर्थमा
कठोर परिश्रम गर्दछन्।
जाति-जातिहरूको परिश्रम खाली आगोको लागि हुनेछ।”
यर्मियाले बाबेललाई एक सन्देश पठाउँछन्
59 यो सन्देश अगमवक्ता यर्मियाले नेरियाहको छोरो मासेयाहको नाति सरायाहलाई दिए। सरायाह यहूदाका राजा सिदकियाहसँग बाबेलतर्फ गए। यस बेला सिदकियाहको शासनकालको चौथो बर्ष थियो। अहिले सरायाह राजभवनका मुख्य भारदार थिए। 60 यर्मियाले त्यो पुस्तकमा ती सम्पूर्ण भयानक कुराहरू जुन बाबेलमा घट्नेवाला थिए सबै लेखिदिएका थिए।
61 यर्मियाले सरायाहलाई भने, “जब तिमी बाबेलमा जान्छौ यी वचनहरू जोरले पढ्नु। 62 तब भन, ‘हे परमप्रभु! तपाईंले यो बाबेल नष्ट गरिदिन्छु भन्नु भएको छ अनि यहाँ मानिसहरू र पशुहरू कोही पनि यसमा बसो-बासो गर्ने छैनन्।’ 63 यो पढिसके पछि, यसलाई ढुङ्गमा बाँधेर यूफ्रेटिस नदीमा फ्याँकिदेऊ। 64 त्यसपछि भन, ‘यसको विरोधमा म जुन सर्वनाश ल्याउनेछु जसले गर्दा बाबेल त्यसरी भासिनेछ त्यो कदापि माथि उठ्न सक्नेछैन।’”
यर्मियाका सन्देश यहाँ समाप्त हुन्छ।
51:1 लेब कामी हिब्रू भाषामा “कल्दी” को अर्को नाउँ वा “बेबिलोनीहरूको” अर्को नाउँ।